Ukuyoganela kwenye indawo kuholele ekutheni avule ibhizinisi osenekhemisi lakhe. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNkk uMkhize uwumnikazi wekhemisi iNdolethu Pharmacy yaseMtubatuba, enyakatho yeKwaZulu-Natali. Ulwazi lweminyaka lokuba wusokhemisi ezikhungweni zikahulumeni nezizimele lube nomthelela omuhle esinqumweni sokuqala iNdolethu ngo-2017.
“Ngineziqu (i-Bachelor) of Pharmacy (i-BPharm) engazithola enyuvesi eyayibizwa ngeDurban-Westville (osekuyi-UKZN). Ngithe sengiqedile ukufunda, ngayoqeqeshelwa umsebenzi esibhedlela iPrince Mshiyeni (eMlaza, eThekwini), nokungenye yezindawo engathola (kuzona) ulwazi ngomsebenzi wami. Angigcinanga lapho, (ngike) ngasebenza naseMpumalanga Kapa esibhedlela iHoly Cross, lapho ngacijwa khona. Nasesibhedlela iNu Shifa (e-Overport, eThekwini) ngasebenza.
“Kodwa kuthe uma sengishada kwacaca ukuthi kumele ngisuke lapho engasengiqashwe khona esibhedlela iKing George (iKing Dinuzulu e-Overport), (ngiye) eRichards Bay. Yilapho-ke engahlala khona ngabona ukuthi yiningi imali uma usebenzela amakhemisi amakhulu, lawa agcwele ezinxanxatheleni zezitolo kuleli zwe,” kulanda yena.
INdolethu Pharmacy wukuphela kwekhemisi lomnyama eMtubatuba. Lesi ngesinye sezizathu ezenza lehluke kwamanye amakhemisi endawo. “ENdolethu sibheke kakhulu amakhasimende amnyama, sinayo nemithi yesiNtu esetshenziswa ngabantu bakithi, siphinde futhi sibe nalena (yesilungu).
INdolethu Pharmacy, ikhemisi lomuntu omnyama wesifazane
“Sinanomtholampilo ngaphakathi, okuyinto lena amakhemisi amaningi angenayo. Futhi sisebenzisana kahle nohulumeni, ikakhulukazi ngemithi yabantu abanezifo (ezingamahlalakhona). Engifisa ukukuqala manje wukuhambisela iziguli imithi, ikakhulukazi lezi ezisezindaweni zasemakhaya,” kuqhuba uNkk uMkhize.
Uthi kuhle ukwanda kosomakhemisi abamnyama futhi abanamakhemisi abo. “Bakhona abantu abamnyama abangosokhemisi nabo asebenamabhizinisi ezindaweni ezehlukene, nokuyinto enhle kakhulu lena, ikakhulukazi ngoba besingabantu abancishekile amathuba ngaphambilini,” kusho yena.
INdolethu inezisebenzi ezine, okukhona kuzona nomhlengikazi obhekelele ukusiza iziguli ezisuke zidinga umhlengikazi.
UNkk uMkhize uyakuthokozela ukuba nobudlelwano obuhle namakhasimende nabantu abasuke bedinga usizo ekhemisi labo.
“Kuyangithokozisa ukuzwa ikhasimende lincoma indlela esilisize ngayo noma imithi ebe wusizo ngayo. Engikufisayo wukuthi ngiqhubekele phambili ngivule amanye amakhemisi nokwengeza izisebenzi,” kusho yena.
“Kumqoka njengosokhemisi ukuthi uma usemsebenzini uqikelele ukuthi uthola ulwazi olwenele emakhasimendeni neziguli ukuze kube lula ukuwaluleka nokuwasiza ngendlela.”
Iseluleko sikaNkk uMkhize njengoba kuyiNyanga yabaNtu beSifazane sithi kumqoka ukuthi bawasukumele amaphupho abo ngoba ukuba wumuntu wesifazane kukodwa kuyingqayizivele eNingizimu Afrika ngalesi sikhathi.